မြရွက်ဝေ: သူတို့ကို ဘယ်လိုခေါ်ရမယ်?
Posted by မြရွက်ဝေ at 2:42 AM
အိုတယ်လို့ပြောရင်တော့မကြိုက်တာ အမှန်ဘဲ အရင်အတိုင်းဘဲနောဆိုရင်တော့ပီတိ အဖြစ်ဆုံးပေါ့
ဒါနဲ့ အိုဘားမား ဆိုရင်ရေား)
အိုဘားစံခင်ဦးမေ..အဲလေ အိုနဲစံခင်ဦးမေက အရင်အတိုင်းပဲ
coz, long time before oneday, I wrote
ojiisan(not oji san),then,he complained..hay,..I was not ojii san.
even his age is over 68.
Later,, I should care to call them.
But,..some Jp ladies who i know can call okaasan. :)
Sometime, I met one of my obachan , she allowed to called obasan,..so we r ok for that name. but her friend who i met Jp lady first time said to me, she is not my oba san, so don't call like that.
OMG! in my mind suddenly changed depend on her behaviour. At that time, my oba san told to her, this is allowed .
Even thought that Jp lady cannot accept.I hate to her but i didn't say anything.
Now, she understand and we r good dealing.
First time , some Jp r really strange to behave all foreigners.
these days, I met some Jp ladies,they used their name 'oba san ,oba san, then,,i call to them oba san. :) they r now more than 65 years old.
so, i think, if they use oba san,then we can call to oba san.
မခင်ဦးမေ---> အိုလိုက်တာနော်လို့တော့ ဘယ်သူမှ မပြောပါဘူး။ :D
မသုနှင်းဆီ---> ညီမနံမည်ရဲ့ ထိပ်ဆုံးစာလုံးကို အနောက်ဘက်မှာ "ချန်"လို့ပေါင်းပြီးခေါ်ပါတယ်။ မောင်/မ စတဲ့အသုံးလိုမျိုး နံမည်နောက်မှာ "စံ"လို့ထည့်ခေါ်တာကို ရင်းနှီးသမှုနဲ့ "ချန်"လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ညီမနံမည်က သူတို့အသံထွက်မှာမရှိတော့ တညိုးကြီးတော့ ဖြစ်တယ်။ အရင်ကတော့ ကိုယ့်ကိုခေါ်တယ်မထင်လို့ ပြန်မထူးတာ ခဏခဏ၊ ခုတော့လည်း အကျင့်ရလာပါပြီ။
မထိုက်ဆွေ---> (အမည်ပေါင်းတာ မှားရင်ပြောနော်) သူတို့အလေ့တွေက ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပြောင်းပြန်တွေ အများကြီးရှိတာမို့ တတ်နိုင်သလောက် သတိထားရတယ်။
မမိုမိဂျိ---> ဟုတ်တယ်အမရယ်၊ အသက်၆၀ကျော်လည်း အဖိုး/အဖွားခေါ်တာ မကြိုက်ဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ojisan/ obasan/ ojiisan/ obaasan လို့ သုံးလာရင်တော့ အဲလိုဘဲ ပြန်ခေါ်ပါတယ်။ watashiလို့ဘဲ သုံးလာရင်တော့ နာမ်စားပြန်မသုံးဖြစ်အောင် ပြောပါတယ်။ အမည်မှတ်နိုင်ရင်တို့ သူတို့ရဲ့ မျိုးရိုးအမည်က sanပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ်နော်.. ဒီမှာက မြန်မာပြည်မှာလို နာမ်စားသုံးပြီး ခေါ်ရတာ အဆင်မပြေဘူး.. အဲဒါကြောင့် အမတော့ ဘယ်လိုမှ မခေါ်ဘူး.. စကားပြောဖြစ်တာလည်း ခဏတဖြုတ်ဆိုတော့လေ.. ခေါ်တတ်ဘူးရယ်... တချို့တွေက ရထားပေါ်မှာ နေရာဖယ်ပေးရင်တောင် သိပ်မကြိုက်တတ်တာဆိုတော့ တမျိုးတော့ တမျိုးပဲနော်... :)
အန်တီမြရွက်ဝေ၊ တီတီ မြရွက်ဝေလို့ တူလေး/တူမလေးကို ခေါ်ခိုင်းနော်... :)
အဘွားကြီးကိုလည်း အိုနိစံ.. မတိမ်းမယိမ်းတွေလည်း အိုနိစံ ဆိုရင် အိုနိစံ ငယ်ငယ်လေးတွေက အဖွားခေါ်ခံရသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့ ..